‘Tahribatsız Muayene‘ NDT Günleri-XI. Kaynak Kongresine Giderken Etkinliği - RayHaber
HomeတူရကီMarmara ဒေသကြီး16 BursaNDT-XI ၏ '' non-ဖျက်လိုဖျက်ဆီးစမ်းသပ်ခြင်း '' နေ့ရက်များ။ Giderken ပွဲရင်းမြစ်ကွန်ဗင်းရှင်း
11 / 09 / 2019 Levent Elmastaş 16 Bursa, ရထားလမ်း, လှုပ်ရှားမှုများ, အထွေထွေ, ခေါင်းစီးသတင်း, Marmara ဒေသကြီး, တူရကီ 0
NDT Non-ဖျက်ဆီးစစ်ဆေးရေးညီလာခံအဖြစ်အပျက်၏အရင်းအမြစ်မှ Xi လမ်း gunleri
အဆိုပါစာမေးပွဲစင်တာတွင်ကစီစဉ် MMO အရင်းအမြစ်ပညာရေးနှင့်တစ်ဦးပိုမိုအားကောင်းကဏ္ဍအလိုက်အသင်းအဖွဲ့ဖန်တီးနိုင်ရန်အတွက်, 28 စက်တင်ဘာလ 2019 အပေါ် `XI ''` က Non-ဖျက်လိုဖျက်ဆီးစမ်းသပ်ခြင်း "ဟုအဆိုပါအလငျး၌, ထိုကဏ္ဍများအတွက်အရေးကြီးသောကိစ္စများဆွေးနွေးကြသည်အခြေအတင်ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာအချက်အလက်များ၏ရလဒ်များပါလိမ့်မည် '' ။ ဂဟေဆော်နည်းပညာအမျိုးသားညီလာခံနှင့်ပြပွဲ NDT-XI အရင်းအမြစ်ကွန်ဂရက်၏နေ့ရက်များဖြစ်ရပ် layout ကို Giderken` ပါလိမ့်မယ် "ဘာတင်သွင်းလိမ့်မည်" ။
အကျိုးစီးပွား၏စက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့်လျှောက်လွှာဧရိယာ၌နည်းပညာဆိုင်ရာတိုးတက်မှုတွေ၏ MMO ချဲ့ထွင်ခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုများ၏အကြောင်းကြားကြောင်းသေချာစေရန်အလို့ငှာတာဝန်ယူဆ။ ဤအခြေအနေတွင်, MMO နှင့်လယ်ပြင်၌ထွက်သယ်ဆောင်လှုပ်ရှားမှုများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ကူညီအတွက်ဤသတင်းအချက်အလက်လိုအပ်သောလှုပ်ရှားမှုများအားဖြင့်ဖန်ဆင်းတော်အသုံးပြုသူများနှင့်သက်ဆိုင်သူများမှတဆင့်သတင်းအချက်အလက်များထုတ်လုပ်မှာစည်းမျဉ်းသည် router ၏တည်နေရာကိုခိုင်ခံ့စေဖို့တူညီတဲ့ platform ကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ရည်မှန်းနှင့်၎င်းတို့၏အလုပ်လက်အောက်ခံဖို့ပါတီများနှင့်အတူမျှဝေဖို့ရည်ရွယ်သည်။
ဒီရည်ရွယ်ချက်, ထိုစာမေးပွဲစင်တာတွင်ကစီစဉ် CME အရင်းအမြစ်ပညာရေးနှင့်အဘို့, တစ်ဦးပိုမိုအားကောင်းကဏ္ဍအလိုက်အသင်းအဖွဲ့ဖန်တီးနိုင်ရန်အတွက်, 28 စက်တင်ဘာလ 2019 အပေါ် '' `က Non-ဖျက်လိုဖျက်ဆီးစမ်းသပ်ခြင်း" ကဏ္ဍများအတွက်အရေးကြီးသောကိစ္စများဆွေးနွေးကြသည်အခြေအတင်ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်အလင်း၌နည်းပညာဆိုင်ရာအချက်အလက်များ၏ရလဒ်များပါလိမ့်မည် '' `XI ။ ဂဟေဆော်နည်းပညာအမျိုးသားညီလာခံနှင့်ပြပွဲ NDT-XI အရင်းအမြစ်ကွန်ဂရက်၏နေ့ရက်များဖြစ်ရပ် layout ကို Giderken` ပါလိမ့်မယ် "ဘာတင်သွင်းလိမ့်မည်" ။
အဖြစ်အပျက်အသေးစိတ်ကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောနေကြသည်။ ပါဝင်မှုအခမဲ့ဖြစ်ပါသည်, မှတ်ပုံတင်အမှုကိုပြုရမည်ဖြစ်သည်။ စံချိန်တင်များအတွက် ဒီမှာ နှိပ်ခြင်းဖြင့်အွန်လိုင်းကိုသင်မှတ်ပုံတင်နိုင်
ထိုအဖြစ်အပျက်အကြောင်းအသေးစိတ် ဒီကနေ သငျသညျသင်ယူနိုင်ပါတယ်။
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: အရင်းအမြစ်များကိုသောက်သုံးသူ Work များကရှာဖွေတွေ့ရှိထားသည့် SSG နှင့်ထိုင်းအစိုးရကရိန်း NDT စမ်းသပ်ခြင်းရလဒ်များ 20 / 04 / 2018 လေလံအပိုဒ် 1- စီးပွားရေးပိုင်ရှင်ပြန်ကြားရေးအုပ်ချုပ်ရေး 1.1 နှင့် ပတ်သက်. နူးညံ့ပြဿနာအရင်းအမြစ်ကိုသောက်သုံးစီးပွားရေးရလဒ်များအကြောင်းအရာအားဖြင့်ရှာဖွေတွေ့ရှိထားသည့်အဆိုပါ SSG ၏ TCDD Haydarpasa ဆိပ်ကမ်းစစ်ဆင်ရေးညွှန်ကြားမှုနှင့်ထိုင်းအစိုးရကရိန်း NDT စမ်းသပ်ခြင်း။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်အုပ်ချုပ်ရေး; က) အမည်: TCDD Haydarpasa ဆိပ်ကမ်းစစ်ဆင်ရေးညွှန်ကြားမှုခ) လိပ်စာ: Selimiye Iskele Mah ။ Burhan Felek CAD ။ အမှတ် 1 Üsküdar / ဂ) တယ်လီဖုန်းနံပါတ်: 02163488020-4707-4985 ဃ) ဖက်စ်နံပါတ်:falizengin@tcdd.gov.t 02163451705 င) အီလက်ထရောနစ်မေးလ်လိပ်စာ) အမည်နှင့်အမညျ / ခေါင်းစဉ်အဲလစ် Rich 1.2 ၏သက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်များ။ လေလံအထက်ပါလိပ်စာနှင့်နံပါတ်များမှာတာဝန်ခံအတွက်ဝန်ထမ်းများဆက်သွယ်ခြင်းအားဖြင့်တင်ဒါခေါ်ယူမှုနှင့် ပတ်သက်. သတင်းအချက်အလက်ရယူနိုငျသညျ။ အပိုဒ် 2- ...
ရထားလမ်းစနစ်များလုပ်ဆောင်ချက်: ခေါင်းဆောင်ဗြိတိန်မီးရထားပေးသွင်းလှုပ်ရှားမှု 25 / 03 / 2013 ထိုကဲ့သို့သောအင်္ဂလန်၌စည်းဝေးကြမှသတင်းအချက်အလက်စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့်ပါဝင်သူများ၏ထိတွေ့ဆက်ဆံမှု, ထိုရထားလမ်းကဏ္ဍတွင်ပေးသွင်း '' မဟာဗျူဟာ '' အဖြစ်အရေးကြီးသောကိစ္စများန်းကျင်မီးရထားကွန်ယက်ရထားကုန်ပစ္စည်းလက်ခံသိကောင်းစရာများ, ကုန်ပစ္စည်းတီထွင်မှု၏ဦးဆောင်ပေးသွင်း။ Posted: အင်္ဂါနေ့, ဧပြီ 9, 2013 (လက်မှတ်တွေ booking အဘို့အင်္ဂါနေ့ဧပြီ 09 2013 နောက်ဆုံးနေ့) တည်နေရာ: အဆိုပါကှကျ Yard (ရာဇဝင်လက်ဝါးကပ်တိုင်ဘူတာ), လန်ဒန်နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များရယူရန်နှိပ်ပါ: Raillynews
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: စက်ရုံအလုပ်အကိုင်ရထားဂဟေဆော်ခြင်းရထားဂဟေဆော်ခြင်းစက်ရုံလုပ်ခြင်း 21 / 03 / 2013 ray အရင်းအမြစ်စက်ရုံတည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းများ STATE ရထားလမ်းအုပ်ချုပ်ရေးတူရကီအထွေထွေညွှန်ကြားရေးမှူး (TCDD)2၏ဝယ်ယူရေးအသိပေးစာသမ္မတနိုင်ငံအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ အလုပ်ပြုသောအမှုဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်ယိမျးမယိုဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားရေးမှူးရထားဂဟေဆော်ခြင်းရထားဂဟေဆော်ခြင်းစက်ရုံစက်ရုံအမှတ် 4734 ပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးအက်ဥပဒေပုဒ်မ 19 အညီပွင့်လင်းတင်ဒါလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်။ တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2013 / 33641 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: Marsandiz အပန်းဖြေ Behicbey YENİMAHALLE / တူရကီခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 3123090515 ပြည်တွင်းရေး 1828 သို့မဟုတ် 1751 - 3122111571 ဂ) E-Mail ကနေရပ်လိပ်စာ: ozlembozbay@tcdd.gov.t ဃ) တင်ဒါ https: //ekap.kik.gov.tr/ekap / ... စာရွက်စာတမ်းအင်တာနက်လိပ်စာတွင်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: ဒစ်ဂျစ်တယ်များ၏ညှိနှိုင်းအင်ဗာတာဂဟေဆော်စက် - များ၏ညှိနှိုင်းဒီဂျစ်တယ်အင်ဗာတာဂဟေဆော်စက် (TÜVASAŞ) ဝယ်ယူပါလိမ့်မည် 21 / 10 / 2015 - Entity အပိုဒ် 2015- 43486 ချုပ်ဝင်အပေါ်ကိစ္စရပ်များပြန်ကြားရေး RELATED နုနှင့်လေလံ၏လကျအောကျခံ 1 / 1.1 II ကို: - TÜVASAŞ DG ဒစ်ဂျစ်တယ်များ၏ညှိနှိုင်းအင်ဗာတာဂဟေဆော်စက်ဒစ်ဂျစ်တယ်များ၏ညှိနှိုင်းအင်ဗာတာဂဟေဆော်စက် JCC မှတ်ပုံတင်နံပါတ်ဝယ်ယူပါလိမ့်မည်။ အဆိုပါစာချုပ်ဝင် Entity; က) အမည်: TÜVASAŞအထွေထွေညွှန်ကြားမှုခ) လိပ်စာ: Mithat Pasha Maher ။ အမျိုးသားအချုပ်အခြာအာဏာ cad.no:xnumx, ADAPAZARI / တူရကီဂ) တယ်လီဖုန်းနံပါတ်: 131 90 264 (ပြည်တွင်း: 2751660-3451-3452) ဃ) ဖက်စ်နံပါတ်: 3453 90 264 င) E-mail ကိုလိပ်စာ: satinalma@tuvasas.com.t များအတွက် ) Related ယူနစ်: အရစ်ကျနဲ့ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန - သုတေသနနှင့်ပစ္စည်းဝယ်ယူရေး ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: က Non-ဖျက်လိုဖျက်ဆီးစမ်းသပ်ခြင်းဝန်ဆောင်မှုAlınacaktır၏ Gantry crane 16 / 02 / 2017 Gantry က Non-ဖျက်လိုဖျက်ဆီးစမ်းသပ်ခြင်းဝန်ဆောင်မှု4စုစုပေါင်း MSM အမှတ်တံဆိပ် gantry ရိန်း၏အစိတ်အပိုင်းများ၏ nondestructive စမ်းသပ်ခြင်း (NDT) တွင်တည်ရှိသောကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိပ်ကမ်းကို 4734 အပိုဒ်အရသိရသည်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ၏ဝန်ဆောင်မှုများကို 19 ပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးဥပဒေအမှတ်၏ဝယ်ယူရေးနှင့်ပတ်သက်သောကိစ္စရပ်များအားဖုံးလွှမ်းသည့်ရိန်းသမ္မတနိုင်ငံ STATE ရထားလမ်း Administration ရုံးချုပ် (TCDD) HAYDARPAŞAဆိပ်ကမ်း Operation Manager ၏ခေါ်ဆောင်သွားပါလိမ့်မည် ဒါဟာနည်းလမ်းအားဖြင့်ချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်: တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2017 / 45785 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: SELIMIYE မိန်းမဆောင် ISKELE လမ်းပေါ်မှမိန်းမဆောင်ÜSKÜDAR / အစ္စတန်ဘူလ်ခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 2163488020 - 2163451705 ဂ) e-mail လိပ်စာ: အ @ TCDD alizeng ။ gov.t သုံး) နူးညံ့သောစာရွက်စာတမ်းကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါသည်ဖြစ်ပါတယ် ...
အဆိုပါအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရေကြောင်းအဖွဲ့ '' Cable ကိုကားဇုန်မှာ Data ဆုံးရှုံးမှု '' ၏ Gurpinar Sakarya နျဌာနခှဲသမ္မတ
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: အရင်းအမြစ်များကိုသောက်သုံးသူ Work များကရှာဖွေတွေ့ရှိထားသည့် SSG နှင့်ထိုင်းအစိုးရကရိန်း NDT စမ်းသပ်ခြင်းရလဒ်များ
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: ဒစ်ဂျစ်တယ်များ၏ညှိနှိုင်းအင်ဗာတာဂဟေဆော်စက် - များ၏ညှိနှိုင်းဒီဂျစ်တယ်အင်ဗာတာဂဟေဆော်စက် (TÜVASAŞ) ဝယ်ယူပါလိမ့်မည်
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: က Non-ဖျက်လိုဖျက်ဆီးစမ်းသပ်ခြင်းဝန်ဆောင်မှုAlınacaktır၏ Gantry crane
တူရကီနှင်းလျှောစီးအဖွဲ့ချုပ်မှ3။ သာမန်ညီလာခံဖို့
တူရကီအတွက် 2016 အတွက်ကျင်းပမည့် high မြန်နှုန်းကွန်ဂရက်, အစ္စတန်ဘူလ်အတွက်စည်းရုံးဖို့ကိုယ်စားလှယ်လောင်း